Tarihin'ny Ben'ny tanana penjy randrianarisoa. Ho an'ny cache bouche manokana dia miisa 3000 izy ireo ka hahazo hatramin'ny mpivarotra amoron- dalana amin'izao fiandohany izao. Miampy ranom-panafody famonoana bobikely 5 barika ireo ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny otrik'aretina coronavirus. Tsiahivina moa fa mpitandro ny filaminana amin'ireo paositry ny zandarimariam. pirenena 4 ao an-toerana koa toa an'Ankadindravola, Ivato.. . no nahazo tombontsoa tamin'izany.